warkii.com » Deg Deg: Kangana oo sheegtay in Aditya Chopra ugu hanjabay bur-burka waayaheeda Bollywoodka iyo sheeko la xiriirta Filimkii Sultan!!
Deg Deg: Kangana oo sheegtay in Aditya Chopra ugu hanjabay bur-burka waayaheeda Bollywoodka iyo sheeko la xiriirta Filimkii Sultan!!
Atiriishada caanka ah Kangana Ranaut ayaa sheeko xiiso leh shaaca ka qaaday oo In badan dadka ka qarsooneyd inta kiiska Sushant socdo Ranaut waxyaabo badan ayee dadka la wadaageysa shalay ayeena ahed markee lahed waxaan celin doonaa abaal marinta PADMA SHRI maantana sheeko horleh ayaa soo baxday.
Ranaut waxay sheegtay in Aditya Chopra oo ah madaxa ugu sareeyo shirkada Yash Raj Filims ugu hanjabay inuu bur burin doono mustaqbalka atiriishadan ee Bollywoodka dhowr sano kahor ayuuna sidaas yiri balse hader ayee iyada shaaca ka qaaday.
Waxay tiri iyadoo hadleysa,”waxaa gurigeyga iigu yimid Director-ka Filimka Sultan si uu sheekada Filimka iigu akhriyo ana aan u dhageysto waxaaana xiligaas kadib balan la lahaa Aditya si aa oga cudur daarto sameeynta iyo inaan raali ka ahen doorka la iga siiyay balse waxaa faafay hadalka ah “Kangana waxay iska diiday Sultan” waana kahor inta aan Aditya la kulmin una sheegin inaan ka cudur daaranaayo Filimka Sultan doorka oo igu yar aawgii.”
“Maalmo kadib waxaa fariin qoraaled iiso diray mudane Aditya isagoo igu leh”yaa awood kuu siiyay inaad filimkeyga diido ma adiga ayaa aniga filimkeyga diidi karo hadaba ogow wey kuu dhamaatay” aniga hadalkiisa kama jawaabin balse waxuu iigu hanjabay inuu shaqadeyda Bollywood bur burin doono.”
Kangana filimkaas sababte u diiday waxay ahed doorka laga siiyay oo ay dhaliishay waxaana doorkaas markii dambe sameysay atiriishada Anushka Sharma dhanka kale Aditya Chopra booliska ayaa suaalo weydiyeen kuna saabsan kiiska Sushant maadama shirkadiisa farta lagu fiiqay inee si xun ula dhaqmeen Sushant markuu noolaa.